Ciyaartoy wacad ku marey in wadooyinka ku ordayo isagoo qaawan, maxaa u sabab ah? – SBC
Ciyaartoy wacad ku marey in wadooyinka ku ordayo isagoo qaawan, maxaa u sabab ah?
Aduunka aynu ku nool nahay maalin kasta wax kugu cusub oo hadana kaa yaabiya ayaad maqlaysaa, ama shaahid iyo marqaati u noqonaysa, tiiyoo ay sii dheertahay dhacdooyinka maalin laha ee qosolka iyo yaabka leh ee iska soo daba dhacaya.
Ma ha lagaa sheegaa mise waa ka daacad, tu ay tahayba waxaa isa soo taraya dadka sameynaya wax marna qosol noqda marna yaab iyo fajiciso reeba.
Daaficii hore ee xulka qaranka Faransiiska ee xulkaasi la qaaday koobkii aduunka France 98 Bixente Lizarazu ayaa mar kale xaqiijiyey in isaga oo qaawan oo aan wax dhar ah haba yaraatee qabin xitaa kastuumo ama nigis uu dhex carari doono wadooyinka waa weyn ee magaalada Evian ee wadanka Faransiiska, isagoo taasi ku macneeyey dabaaldeg farxadeed.
Lizarazu oo sidoo kale ka mid ahaa xulka kooxda Jarmalka ee Bayer Munich ee ku guuleystey koobka Champions League sanadkii 2001-dii, ayaa sababta uu isku qaawinayo wuxuu ku macneeyey ka dib markii kooxda uu saamiga ku leeyahay ee Evian Thonon Gaillard, ay ku guuleysatey inay u soo baxdo ka qayb galka horyaalka wadanka Faransiiska ee loo yaqaan Ligue 1, iyagoo ka soo gudbay heerka sadexaad.
Bixente Lizarazu oo wareysi siiyey Telefishinka Faransiiska laga leeyahay ee lagu magacaabo FT1 ayaa la waydiiyey in uu ka laabanayo go’aankan waxaase uu yiri “Waan sameyn doonaa, waan ku dhaqaaqi donaa, waana ku taagnaan doonaa balanqaadkii aan sameeyey bishii July ee sanadkii hore ee ahaa inaan isqaawiyo oo orod ku dhexmaro wadooyinka, waliba waxana casuumi doonaa oo aan u yeeri doono warbaahinta caalamiga ah”.
Lizarazu wuxuu sidoo kale wadankiisa kula guuleystey qaadistii koobka Euro 2000, sanadkii 2006-dii ayaa gabi ahaanba isaga fariistey ciyaaraha, waxaana uu ka mid noqdey dadka saamiga ku leh kooxda uu haatan guusheeda dharka u dhiganayo ee uu isku qaawinayo, taasi oo qayb ka ah dhibaatada dimuqraadiyada ee qofku xorta u yahay in uu sameeyo waxa uu doono, tiiyoo aanay jirn diin ay haystaan oo ay uga waabanayaan ficiladan foosha xun ee xitaa aadamtinimada iyo caqliga saliimka ah salka ku hayn.